Mushaar Bixixn Maanta ka Bilaaban tay magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada Hoose – idalenews.com
Iyadoo maalmihii danbe ay jireen Gadood ay sameynayeen Ciidamada dawladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka eek u sugan Magaalada Kismaayo ayaa markii u horeeyay manta la joojiyay Gadoodkaas.
Ciidamadan Gadoodka samaynayay ayaa waxaa falal Fowda ah ay ka samaynayeen gudaha Magaalada Kismaayo iyagoona Jid gooyooyin u sameynayay gaadiidka wadadaas maraya gaar ahaana kuwa ay wataan Saraakiisha Ciidamada iyo kuwa maamulka.
Gadoodka ay sameynayeen Ciidamada ayaa manta gebi ahaanba la so oaf jaray ka gadaal markii xal loo helay Cabashadii Ciidankaas oo sheegayay illaa Seddax Bilood ah inaan wax xuquuq ah la siin.
Yuusuf Macalim oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada eek u sugan magaalada kismaayo oo war baahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulku ballan qaaday bixinta Mushaaraadka iyadoo manta Askerigiiba la siiyay Boqol Doolar lacagaha kalena ay ka maqan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badana uu maamulku u ballan qaaday inuu bixinayo.
Sarkaalkan ka tirsan Ciidamada ayaa sheegay in durbaba Ciidamadii waddooyinka taagnaa ay fariisimadoodii dib ugu laabteen waliba ay ballan qaadeen in ay sii laban laabi doonaan Ilaalinta ammaanka magaalada.
Ciidamadan ayaa sidoo kale ballan qaaday in aysan samayn doonin Gadood danbe maamulkoodana ay ka sugayaan Xuquuqaha u harsan iyagoona ku calaacalay in muddo seddax Bilood ah aysan qaadan wax mushaar ah Caruur iyo Xaasasna ay ku xiriiraan sababtaasina ay tahay midda keentay inay ka gadoodaan Xaaladihii soo maray.
Si kastaba Ciidamadan ayaa ah Ciidamadii la dagaalamay Xarakada Shabaab ee Goboladaas ka xoreeyay kuwaasoo weli u taagan sugidda ammaanka Gobolada ay joogaan.